တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေကြပြီ (အပိုင်း ၂) - Myanmar Network
Posted by Betty on April 29, 2015 at 11:03 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဘာကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ တစ်မျိုးတည်းသာလျှင် သုံးသင့်ပါလဲ?
တားမြစ်သတ်မှတ်ထားမှု မရှိသည့် ဘာသာပေါင်းစုံသုံးစွဲခြင်းစနစ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝမှုမရှိဘဲ အရေးကြီးသော အပြန်အလှန်တုန့်ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်မှုကို တားဆီးသည့်အပြင် အဓိကကျသော ဦးတည်ချက်များ ရရှိအောင်မြင်ရေးတွင် လာရောက်နှောင့်ယှက်စေမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ဖွယ်ရာများကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ သုံးစွဲ သူများ၊ လုပ်ငန်းဖော်များနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် လိုအပ်လာသောအချက်သည် ကုမ္ပဏီ၏ရုံးချုပ် မည်သည့်နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည်ဖြစ်စေ အင်္ဂလိပ်စာကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး တရားဝင်ဘာသာစကားအနေနှင့် သတ်မှတ်ရန် ရွေ့လျားခြင်းဆီသို့ ပိုမို အရှိန် မြှင့်တင်လာစေပါသည်။ အောက်ပါ အခြေခံကျသော အကြောင်းအရင်းသုံးရပ်သည် အင်္ဂလိပ်စာဆီသို့ စီးပွားရေးစံ အနေနှင့် သွားနေမှုကို တွန်းပို့ပေးနေပါသည်။
သင်ဝယ်ချင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ရောင်းချင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည် လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ၊ ရောင်းချပစ္စည်းသွင်းသူများနှင့် အခြားသော စီးပွားဖက်အဖော်များနှင့်ပါ ပြောဆို ဆက်ဆံနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကံကောင်းပါက ထိုလူများသည် သင်၏ မိခင်ဘာသာစကားကို သုံးစွဲနေသူများ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ သို့သော် သင်သည် ဤကဲ့သို့သော ပုံသေကားချပ် အခြေအနေကို မျှော်လင့်ပြီး အလုပ်လုပ်နေ၍မရပါ။ ဘာသာစကားနည်းဗျူဟာတစ်ခုကို တီထွင်သုံးစွဲမှု မပြုနိုင်သော ကုမ္ပဏီများသည် သူတို့၏ တိုးတက်မှု အခွင့်အရေးများကို မိခင်ဘာသာစကားသုံးစွဲသော ဈေးကွက်များသို့သာ ကန့်သတ် ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ အင်္ဂလိပ်စာကိုသာလျှင်သုံးစွဲရန် ပေါ်လစီကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးလိုက်သော ၎င်းတို့၏ ပြိုင်ဘက်များနှင့် ယှဉ်ပါက ထင်ရှားစွာပင် မိမိကိုယ်ကို အားနည်းစေရန် ဖန်တီးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။
လုပ်ငန်းတာဝန်များ နှင့် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များအား ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ကျက် အသုံးပြုနိုင်စေခြင်း
ပထဝီအနေအထား ကွဲပြားခြားနားသည့် နေရာအသီးသီးမှလာသော ဝန်ထမ်းများက လုပ်ငန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်များ ပြည့်မီစေရန် အလုပ်အတူတူလုပ်ကြရသောအခါ ဘာသာစကား ကွဲပြားခြားနားမှုများသည် လွယ်မယောင်နှင့်ခက်စေသော အခက်အခဲမျိုးဖြစ်စေသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ဘေရွတ်မြို့ သို့မဟုတ် မက္ကဆီကိုရှိ လုပ်ငန်းတစ်ခုစီမှ အချက်အလက်တစ်ခုခု လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အပြန်အလှန်နားလည်နိုင်သည့် တူညီသော အခြေခံမရှိပါက ဆက်သွယ်မှုတွင် ထိခိုက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘာသာစကားနားလည်နိုင်စွမ်းသည် ဝန်ထမ်းများအား ပိုမို၍ ထိရောက်သော သတင်းအချက်အလက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအချက်သည် သာလွန် ကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်နိုင်မှုအတွက် အရေးကြီးသည်ဖြစ်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအစားအသောက် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သော နက်စ်လေ (Nestle) သည် အင်္ဂလိပ်စာကို ကုမ္ပဏီ၏စံအဖြစ် တွန်းအားပေး သတ်မှတ်ခြင်း ကျေးဇူးကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့် အလုပ်သမားငှားရမ်းခန့်ထားခြင်း ကိစ္စများတွင် ကြီးမားသော စွမ်းရည်ပြည့်ဝမှု တိုးတက်မှုများ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံနယ်နိမိတ်များကို ကျော်ဖြတ်၍ စီးပွားရေုးလုပ်ငန်းအချင်းချင်း ပူးပေါင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများအား ဝယ်ယူချုပ်ကိုင်ခြင်း
စီးပွားရေုးလုပ်ငန်းအချင်းချင်း ပူးပေါင်းခြင်းနှင့် ဝယ်ယူချုပ်ကိုင်ခြင်းကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများသည် ပါဝင်သူတိုင်းက တူညီသော ဘာသာစကားပြောနေလျှင်ပင် ရှုတ်ထွေးလှသည်ဖြစ်ရာ အကယ်၍ ဘာသာစကားမတူညီပါက သေးငယ်သော အဓိပ္ပါယ်ကွဲလွဲသက်ရောက်မှုများသည် ရိုးစင်းသော အကြောင်းအရာများအတွက် အီးမေးလ် အပို့အယူတွင်ပင် လွယ်ကူစွာ ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ယဉ်ကျေးမှုချင်း မတူညီသော လုပ်ငန်းပူးပေါင်းမှုများသည် နာမည်ဆိုးရှိသည်နှင့်အညီ ကလိန်ကျမှုများစွာရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ဟို့ခ်ျ (Hoechst) နှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ ရုမ်း-ပိုးလ်လန့်ခ် (Rhone – Poulenc) တို့ ၁၉၉၈ခုနှစ်တွင် ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့ ပဉ္စမ အကြီးမားဆုံး ဆေးဝါးကုမ္ပဏီဖြစ်သော အာဗန်းတစ်စ် (Aventis) ကို ထူထောင်သောအခါ ကုမ္ပဏီအသစ်သည် ဘက်လိုက်ခြင်းရှောင်ရှားသောအနေနှင့် အင်္ဂလိပ်စာကို ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမနီ ဘာသာစကားများကို ကျော်၍ လုပ်ငန်းသုံး ဘာသာစကားအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ မဟုတ်ပါက တံဆိပ်နာမည် သတ်မှတ်ခြင်း ကိစ္စမျိုးပါ ပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်ပါသည်။ ၁၉၉ဝခုနှစ်များတွင်လည်း လူသိပ်မများလှသော အလယ်အလတ်အရွယ်အစား အီတလီ ကုန်မာပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သော မာလိုနီသည် ၎င်း၏ နိုင်ငံတကာပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် အင်္ဂလိပ်စာကို လုပ်ငန်းသုံးအဖြစ် အသုံးချသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ခြင်းသည် ရုရှား နှင့် အင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီများအား ဝယ်ယူရာတွင် အားသာချက်ဖြစ်စေပါသည်။
လူသားတို့၏သမိုင်းတွင် အမြန်ဆုံးပျံ့နှံ့ခဲ့သောဘာသာစကားဖြစ်သည့် အင်္ဂလိပ်စာကို ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ၁.၇၅ ဘီလီယံခန့်ရှိသောလူများက အသုံးပြု၍ရသော အဆင့်အနေအထားနှင့် ပြောဆိုသုံးစွဲလျက် ရှိပါသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့လူလေးဦးတွင် တစ်ဦးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။
နောက်တစ်ပတ် အပိုင်း (၃) တွင် အောင်မြင်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပေါ်လစီများဖြစ်လာစေရန် ကျော်လွှားရမည့် အခက်အခဲများ နှင့် ပြောင်းလဲခြင်းသည် ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာအဖြစ် ရောက်လာကာ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်မှာ ခက်ခဲနေဆဲ ဖြစ်နေသည်ကို ဖတ်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Permalink Reply by Kyaw Thu on May 1, 2015 at 10:54
In near future, ASEAN countries are making to happen AEC (ASEAN Economic Community).
It will include: (a)asingle market and production base (b)ahighly competitive economic region (c)aregion of equitable economic development and (d)aregion fully integrated into the global economy. At that time, people from other ASEAN countries will flow in and compete the markets and make investments.
So people in Myanmar working as professional and business owners in each industries should not satisfy by using only mother language in your working ground. Everyday, try to improve another common language which is English and set plans for staffs to be improved in English. Nowadays, most of well-knows global brands set to use English in their organizations. Because English is fastest growing language and is being used one in every four of us (which is according to this original article).
Therefore, young people who want to grabaopportunity working in global community need to learn the English daily basis. And you will be ready when opportunities come in.